Mere Zetar - Zetar Industry Co., Ltd.
Plastic Ọgwụ akpụzi
Plastic extrusion akpụzi
Silicone Ọgwụ na ịkpụzi
Ndina Bug n'Ajọ
Dog Nha nha ahịhịa
News n'etiti na
Anyị Alibaba Site
Tọrọ ntọala na 2005, na dabeere nri ebe a na Shanghai China.At 2017, anyị na-utịp na "China High Quality Supplier" nrite site Alibaba na nke ọma dị ka onye ndú na ngwa-n'aka, ala-na-eri China plastic injection ịkpụzi, plastic injection tooling na ngwa ngwa prototyping ọrụ.
2016 Zetar kwagara n'ime a 50,000-square-ụkwụ shop nke bụ na gburugburu 35km n'ebe Shanghai ọdụ ụgbọ mmiri na Pudong Airport. Ugbu a Zetar nwere 6 agadi injinia, niile nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ plastic injection ịkpụzi ụlọ ọrụ. Na ọkara n'ime ha nwekwara ike na-ekwu okwu English.
N'ihi na ihe karịrị afọ 13, anyị na-na-eje ozi ngwa-n'aka plastic injection ịkpụzi na plastic injection Ebu mkpa nke ụlọ ọrụ buru ibu ma na obere - si Fortune 100 na otutu mmalite-ups.We've etinyere anyị nka ka a sara mbara elu ugwu nke ụlọ ọrụ, tinyere ngwaọrụ ahụike, akpakanamde, ahụ ike na-elekọta, ngwá electronic, mbukota ihe onwunwe, na-ewu ihe onwunwe, ezinụlọ, ji egwuri egwu, n'èzí sports gia na ndị ọzọ. Ọ dịghị mkpa na mgbagwoju anya nke gị imewe ma ọ bụ na nke ukwu nke gị iji
Ọgwụ Kpụrụ Plastic akpa, plastic Parts, Injection Molding, Ọgwụ Parts Kpụrụ, Overmolding Ọgwụ na ịkpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi Ngwá Ọrụ,